UMthembu ufisa ingenise nasemakhaya i-netball
AMAQEMBU aKwaZulu-Natal iKingdom Stars neKingdom Queens azodlala kwiTelkom Netball League eqala namuhla e-Olive Convention Centre eThekwini Isithombe: SITHUNYELWE
Zakhele Xaba | April 27, 2022
UMthembu ungenye yezinkakha ze-netball eKZN, abadlali abasakhula ababukeka kuzona. Unogqozi lokukhuthaza intsha nokuyifundisa ngengakuzuza kulo mdlalo. INingizimu Afrika ivivela ukusingatha umqhudelwano weNdebe yoMhlaba ezoba seKapa ngonyaka ozayo. Lokhu kuyithuba eliyingqayizivele kwazise kuzotheleka wonke amazwe omhlaba.
Emasontweni edlule, uMnyango wezeMidlalo esifundazweni wethulwe uhlelo olubizwa nge-Netball Friday’s ngenhloso yokufaka isasasa ngalo mdlalo ebantwini nangeNdebe yoMhlaba.
"Kufanele kuqale thina siyise i-netball ezindaweni zasemakhaya. Emadolobheni bayayazi kodwa ezindaweni ezifana noMkhanyakude, abazi ukuthi i-netball ungaphila ngayo futhi abanye bengathola nemifundaze ngayo. Njengoba sizosingatha umqhudelwano weNdebe yoMhlaba ngonyaka ozayo, kufanele kube yithina esakha isasasa kubantu, sibafake kwi-netball. Abantu abazi ukuthi kuyaphileka ngayo futhi abazi ukuthi kunabadlali nalapha eMzansi, abadlala phesheya," kusho uMthembu.
"Ngikhumbula ngesikhathi kuzodlala ibhola ngo-2010 (iNdebe yoMhlaba), wonke umuntu wayekhuluma ngayo. Ngisho ingane encane yayazi ukuthi kuzodlala umqhudelwano weNdebe yoMhlaba eNingizimu Afrika. Thina sisalelwe yizinyanga cishe ezingu-15 kodwa awuzwakali lowo moya. Kuwumsebenzi wethu ukwenza abantu bazi nge-netball nangobuhle bayo."
UMthembu, owayengumdlali weStars, uzoba sebhentshini uma leli qembu selidlala emqhudelwaneni iTelkom Netball League ezoqala namuhla e-Olive Convention Centre, eThekwini. ITelkom League izodlala eKZN kuze kube uMeyi 1. Umlenze olandelayo uzodlalelwa eHeartfelt Arena, ePitoli, ngoMeyi 20 kuya kuJuni 19.
IStars, ekleliswe kuDivision 1, izomela iKZN neKingdom Queens ekuDivision 2. Angu-12 esewonke amaqembu azodlala kwiTelkom.
"Siyilungele iTelkom. Okukhuthaza kakhulu wukuthi sidlalela ekhaya, phambi kwabalandeli bethu abasifaka umfutho. Ngesizini edlule, besizibekele ukuqeda sibalwa namaqembu amane kodwa saqeda sibalwa namathathu aphezulu. Lokhu kusinika isibindi sokufuna okungaphezulu," kusho uMthembu.
Esewonke amaqembu azogadulisana kwiTelkom National League ami kanje:
Gauteng Jaquars (Gauteng), Southern Stings (Western Cape), Kingdom Stars (KZN), Craniums (Free State), Golden Fireballs (Gauteng), Flames (North West)
Eastern Cape Aloes (Eastern Cape), Tornado (Western Cape), Sunbirds (Mpumalanga), Baobabs (Limpopo), Diamonds (Northern Cape), Comets (Eastern Cape), Kingdom Queens (KZN).